काबुल विमानस्थलमा आक्रमण गर्नेहरू को हुन् ? — Sanchar Kendra
काबुल विमानस्थलमा आक्रमण गर्नेहरू को हुन् ?
काठमाडौँ । बिहीबार साँझ अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित हमिद कारजाई विमानस्थलको गेटमा दुइटा आत्मघाती बि’स्फोट हुँदा कम्तीमा १३ अमेरिकी सैनिक र ६० अफगान नागरिकको मृत्यु भएको छ।
अमेरिकी र नाटो सैनिकले अफगानिस्तान छोड्नु पाँच दिनअघि काबुल विमानस्थलमा भएको यो बिस्फोटले संसारको ध्यान तानेको छ। केही समयअघिसम्म अमेरिकी र अफगान सैनिकसँग लडिरहेका तालिबानहरू काबुलमा सत्ता चलाउन तम्तयार भएका बेला यति ठूलो आक्रमण कसले गर्‍यो भन्ने स्वभाविक जिज्ञासा छ।
बिहीबार साँझको भएका बिस्फोटको जिम्मा मुस्लिम अतिवादी संगठन आइएसआइएसकेले लिएको छ। इस्लामिक स्टेट भनिने अतिवादी समूह आइएसआइस इराक र सिरियामा सक्रिय छ। आइएसआइएसके त्यसैको एउटा शाखा हो। यसको पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोभिन्स हो। यसले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा आफ्ना गतिविधि गर्छ।
द गार्डियनका अनुसार आइएसआइएसकेले बिहीबार साँझको आत्मघाती हमला गर्न अब्दुल रहमान अल-लोगारी गएको जनाएको छ। अब्दुलको नामबाट उनी अफगान नै हुन् भन्ने बुझिन्छ।
अमेरिकी सैनिक र उसका सहयोगीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको आइएसआइएसकेको भनाइ छ। अफगानिस्तानमा अहिले भएकामध्ये सबैभन्दा अतिवादी र हिंसात्मक संगठन यही हो।
बिबिसीका अनुसार सन् २०१५ मा स्थापना भएको यो संगठनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट लडाकुहरू भर्ती गर्छ। धेरैले तालिबानलाई मुस्लिम अतिवादी समूह भन्छन्। तर आफ्नो संगठन कट्टर नभएको ठानेर धेरै तालिबान लडाकुहरू आइएसआइएसकेमा जाने गरेका छन्।
यिनीहरू महिलाका विषयमा तालिबानभन्दा पनि कट्टर छन्। उनीहरूले स्कुले बालिका र अस्पतालका प्रसुति वार्डलाई पनि निशाना बनाउने गरेका छन्। तालिबानहरू अफगानिस्तानमा मात्रै सीमित भएपनि आइएसआइएसकेको स्लामिक स्टेटमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क छ। पश्चिमा मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय र मानवीय सहायता संस्थालाई उनीहरू जहाँ सक्छन् त्यहीँ आक्रमण गर्छन्।
उनीहरूको मुख्य आधार क्षेत्र पाकिस्तान सीमा नजिकैको अफगान प्रान्त नान्गाहार हो। कुनै बेला यो समूहसँग तीन हजार लडाकु थिए। अमेरिकी/अफगान सैनिकको कारबाहीमा तीमध्ये केही मारिएका छन्। आइएसआइएसकेको तालिबान लडाकुसँग पनि तालिबानसँग पनि लडाइँ हुन्थ्यो।
आइएसआइएसकेको तालिबानसँग सोझै सम्पर्क छैन। तर तालिबानको सैन्य समूह हक्वानी नेटवर्कमार्फत् उनीहरू जोडिएका छन्। सन् २०१९ देखि २०२१ सम्मका विभिन्न हमला यी दुई समूह मिलेर गरेका थिए।
पछिल्लो समय अमेरिकीसँग शान्ति सम्झौता गरेको भन्दै आइएसआइएसकेले असन्तुष्टि जनाएको थियो। तालिबानले जिहाद छोडेर अमेरिकीसँग सम्झौता गरेको उनीहरूको आरोप छ।
काबुलमा सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको तालिबानलाई आउने दिनमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती आइएसआइएसके हुने देखिन्छ। उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार साँझ काबुल विमानस्थलमा आक्रमण गर्नेसँग बदला लिने बताएका छन्।
बिस्फोटपछि ह्वाइटहाउसबाट सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकीहरूको ज्यान लिनेलाई नछोड्ने बताएका छन्। ‘जसले यो बिस्फोट गरे र अमेरिकालाई हानी पुर्‍याउन चाहने जोसुकैले पनि थाहा पाइराख्नू हामी माफ दिनेवाला छैनौं न त बिर्सने छौं,’ बाइडेनले भने,‘हामी तिमीहरूलाई फेला पार्नेछौं र यसको मूल्य चुकाउन लगाउने छौं।’